မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: 05/01/2010 - 06/01/2010
ဒီနေ့ မထင်မှတ်ပဲ အဖော်ကောင်းလို့ Prince of Persia ကို ကြည့်ဖြစ်သွားပါတယ်... ဒီကားကို လွန်ခဲ့တဲ့ ၄လ ၅လလောက်ကတည်းက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်က ပြောလို့ကြည့်ချင်ခဲ့တာပါ... ဂိမ်းဝါသနာရှင်တွေကတော့ အဲဒိဂိမ်းက အတော်ကစားလို့ကောင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်... သူငယ်ချင်းကတော့ ရုပ်ရှင်ဟာ ဂိမ်းလောက်မှ ကောင်းပါ့မလားလို့ သံသယ၀င်တယ်လို့ပြောပါတယ်... ကျွန်မလဲ အဲဒိဂိမ်းကို မဆော့ဖူးတော့ ဂိမ်းလောက် ကောင်းမကောင်းမသိပါဘူး... ဒါပေမဲ့ ရုပ်ရှင်ကတော့ သင့် ပိုက်ဆံအလကားဖြစ်တယ်လို့ မခံစားစေရပါဘူး...
ပါရှားနိုင်ငံကို အုပ်ချုပ်တဲ့ဘုရင်ဟာ ညီအစ်ကိုတွေရဲ့ စည်းလုံးချစ်ကြည်မှု သစ္စာရှိမှုကို အလေးထားတဲ့သူတစ်ယောက်ပါ... သူ့မှာ ညီတော် ၁ယောက်နဲ့ သားတော် ၂ပါးရှိပါတယ်... ဒါပေမဲ့ တစ်နေ့ သူတိုင်းခန်းလှည့်လည်စဉ်မှာ အားနည်းသူကို သတ္တိရှိရှိ အမှန်တရားဘက်က ရပ်ပြီး ကယ်ခဲ့တဲ့ ဒတ်စ်တန် ဆိုတဲ့ ကလေးလေးကို မွှေးစားခဲ့ပါတယ်... ဒတ်စ်တန်ဟာ သူရသတ္တိနဲ့ ပြည့်စုံပင်မဲ့ သူ့ထီးနန်းကိုယူဖို့ လုံးဝစိတ်မ၀င်စားတဲ့ သားတော်တစ်ပါးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်... သူတို့နဲ့ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ အလမ်မတ် နိုင်ငံက သူတို့ရန်သူနိုင်ငံကို လက်နက်တွေရောင်းတယ် သတင်းရခဲ့တဲ့အတွက် သူတို့ဟာ အလမ်မတ်ကို ဒတ်စ်တန်ရဲ့ အစွမ်းနဲ့ သိမ်းပိုက်ခဲ့ပါတယ်... အဲဒိနိုင်ငံက မင်းသမီးကိုလဲ ခေါ်ယူခဲ့ပြီး သားတော်တစ်ပါးပါးနဲ့ ထိမ်းမြားပေးဖို့ ကြံရွယ်ခဲ့ပါတယ်... သို့သော် မထင်မှတ်ပဲ ပွဲတော်လုပ်တဲ့နေ့တွင် ဒတ်စ်တန်က ဖခမည်းတော်ကို ဆက်သတဲ့ အကျီင်္ဟာ အဆိပ်ရည်လူးထားတဲ့အကျီင်္ဖြစ်နေပြီး သူ့ဖခမည်းတော် ကွယ်လွန်ခဲ့သလို ဒတ်စ်တန်လဲ ဘုရင်ကို သတ်တဲ့ လူသတ်တရားခံအဖြစ် စွပ်စွဲခံရကာ ၀ရမ်းပြေးဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်... မင်းသမီးနဲ့ ဒတ်စတန်တို့ အတူတူ ထွက်ပြေးရင်း ဒတ်စတန် အလမ်မတ်ကို ၀င်တိုက်တုန်းက ကောက်ရခဲ့တဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ဖန်ဓားလေးရဲ့ အစွမ်းနဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ကို သိရှိခဲ့ရပါတယ်... ဒီလို အခက်အခဲတွေကြားမှာ သူအပြစ်မဲ့ကြောင်း ဘယ်လို သက်သေပြမလဲ... အချိန်ကို နောက်ပြန်သွားလို့ရတဲ့ ဖန်ဓားလေးကို သူဘယ်လို အသုံးချမလဲ... ဘုရင်ကြီးကို လုပ်ကြံတဲ့ တရားခံအစစ်က ဘယ်သူလဲ... သူ့ကို မုန်းတဲ့ မင်းသမီးလေး... အမြဲတမ်း ဖန်ဓားလေးကို ပြန်ယူဖို့ ကြံစည်နေတဲ့ မင်းသမီးလေးနဲ့ သူဘယ်လို လက်တွဲပြီး အလုပ်လုပ်ခဲ့သလဲ... ချောမောလှပတဲ့ မင်းသမီးလေးနဲ့ သူနဲ့ ကြားက သံယောဇဉ် ယုံကြည်မှုနဲ့ တည်ဆောက်တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းလေးက ဘယ်လိုအဆုံးသတ်မလဲ... ဒါတွေအားလုံးကို တော့ ဖန်သားပြင်ပေါ်မှာ ဆက်လက်ရှုစားတာက မဗေဒါ ပြန်ပြောတာထက် အဆပေါင်းများစွာ ကွာခြားပါလိမ့်မယ်...
အွန်လိုင်းက တစ်ချို့ review တွေဖတ်ကြည့်တာတော့ ဂိမ်းထဲက အကောင်နဲ့တူအောင်တော့ တစ်နေရာက တစ်နေရာခုန်တာတွေ ခိုတာတွေကတော့ အတော်လေး တူအောင်ရိုက်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်... မင်းသားနဲ့ မင်းသမီး ၂ယောက်လုံးက ချောလို့လဲ ကြည့်ရတာ မပျင်းသွားပါဘူး... Action, Adventure, Fantasy, Romance အကုန်အစုံပါတဲ့ ကားကောင်းတစ်ခုပါပဲ... မဗေဒါအတွက်တော့ ဒီလိုကားမျိုးကို အွန်လိုင်းကနေ quality ညံ့ညံ့နဲ့ ကြည့်မဲ့အစား အရည်အသွေးကောင်းကောင်း အဆင့်အတန်းမှီမှီနဲ့ ရုံမှာ သွားကြည့်တာက ပိုတန်ပါတယ်... ဒီလိုမျိုး Graphic တွေ effect တွေ sound system တွေသုံးထားတဲ့ ကားကောင်းတစ်ကားကို အလကားရတဲ့ အွန်လိုင်းကနေ ကွန်ပြူတာ screen သေးသေးလေးနဲ့ ကြည့်မဲ့အစား ရုံမှာ အရသာခံပြီး သွားကြည့်တာ အကောင်းဆုံးပါ... အရသာရှိတဲ့ မုန့်တစ်ခုကို အရသာမခံပဲ တစ်ခါတည်းမျိုချရင် တန်ဖိုးမရှိတော့ပါဘူး... အရသာရှိတဲ့ မုန့်ကို အရသာခံပြီးစားမှသာ တန်ဖိုးရှိမှာပါ... နောက်ပြီး ရုပ်ရှင်ပြုလုပ်သူတွေ စိုက်ထုတ်ထားတဲ့ ကြိုးစားအားထုတ်မှုကိုလဲ အလေးထားတဲ့အနေနဲ့ ရုံမှာ ကြည့်ပြီး အားပေးကြပါလို့...
ကိုရီးယား မင်းသားတွေအကြောင်းချည်းရေးနေလို့ ကိုရီးယားမင်းသားကို စိတ်မဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက် အားနာမိပါတယ်... ဒါပေမဲ့ စပြီးသားဖြစ်နေတဲ့ ဂျန်ဂမ်ဆပ် စကာင်္ပူကအကြောင်းလေးကိုတော့ ပြီးဆုံးအောင် ရေးသင့်တယ်ထင်လို့ ဆက်ပါရစေ... ၃ပုဒ် ၄ပုဒ်လောက်ပဲကျန်မှာပါ... ပြီးရင် မဗေဒါမြန်မာပြည်မှာတုန်းက မိဘမဲ့ဂေဟာကို အလှူလုပ်တုန်းက ဗွီဒီယိုဖြစ်ဖြစ်... မဗေဒါရဲ့ ခရီးသွားမှတ်တမ်းဗွီဒီယိုဖြစ်ဖြစ်... ဒီတစ်ပတ် အလုပ်ပိတ်ရက်အတွင်း ၁ခုခုထွက်အောင်တော့ ကြိုးစားပါ့မယ်... အိပ်ရေးက ခုတစ်လောမဝတော့ စိတ်ကမကြည်ပဲ ဗွီဒီယိုအက်ဒစ်ဘက် မလှည့်နိုင်ဖြစ်နေတာပါ... ဂျန်ဂမ်ဆပ် fan meeting video ကျတော့ သိပ်အက်ဒစ်စရာမလိုပဲ ရိုက်လာတာလေးကို ဖြတ်လိုက်ရုံပဲဆိုတော့ လွယ်ကူတယ်လေ...
ရှေ့အပိုင်းမှာ သူလေးအကျီင်္ဝင်လဲနေတုန်း ဆိုလ်းက fan meeting video ကို ပြတာအထိပြီးသွားပါပြီ... ခုတော့ သူလေးထွက်လာပါပြီ... အကျီင်္လဲလိုက်ပါပြီ... ရှပ်အကျီင်္အဖြူလက်ရှည်ပေါ်မှာ စတိုင်ကုတ်အနက်ရောင်လက်ပြတ်လေးနဲ့ သန့်ုပြန့်ခန့်ညား ဆွဲဆောင်မှုအားကောင်းနေပါတယ်... နောက်တော့ သူကရင်းနဲ့ Justin Timberlake ရဲ့ Sexy Back သီချင်းကို ဆိုပြီး ဖျော်ဖြေပါတယ်... အဆိုတော်မဟုတ်တာလဲ တစ်ကြောင်း က ရင်းနဲ့လဲ ဆို ရတော့ အသံကတော့ သိပ်မညိမ်ပါဘူး... ဒါပေမဲ့လဲ ပရိတ်သတ်အတွက်က ကိစ္စတော့ မရှိပါဘူး... သူဘာလုပ်လုပ် သူ့ကိုချစ်လို့ ဒီပွဲလာတဲ့သူတွေချည်းပဲကိုး...
သူက သီချင်းဆိုရင်း Sexy အက Sexy ဟန်အမူအရာလေးတွေ လုပ်ပါတယ်... အဲလိုဆိုတော့ ကျွန်မစိတ်ထဲ သူ့အတွက် စိတ်မကောင်းသလိုလို... သဝန်တိုသလိုလိုဖြစ်မိပါတယ်... သိနေတယ်.. သူက မင်းသား.. သူက ကိုယ့်ကိုတောင် မသိဘူး... မင်းသားတစ်ယောက် အနုပညာသမားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပရိတ်သတ်အကြိုက် အမျိုးမျိုးလုပ်ပြတတ်ရမယ်... လုပ်လဲ လုပ်ပြရမယ်... ဒါတွေအားလုံးကို သိနေရက်နဲ့ ကျွန်မစိတ်ထဲမှာ သဝန်တိုပါတယ်... သူ့ကို ခုလို တခြားမိန်းမတွေ အများကြီးရှေ့မှာ အဲလို အကမျိုးတွေ မကစေချင်ပါ... ( ဟီး.. ဟီး.. ပိုင်စိုးပိုင်နက်နော်... ) စိတ်မကောင်းတာကတော့... သူအဲလိုတွေ ကပြရင် အောက်က မိန်းကလေးတွေက တအားအားနဲ့ အော်ဟစ်အားပေးနေကြတော့... အော် သူက ငါတို့ပေးတဲ့ ပိုက်ဆံနဲ့တန်အောင် ဖျော်ဖြေနေတာပဲ... ဒါသူ့ တာဝန်ပဲ... ငါတို့ပိုက်ဆံယူထားတော့လဲ ငါတို့ကို သူ့ခမျာ ဒီလိုမျိုးတွေ ဖျော်ဖြေနေရတယ်... ဒါမျိုးသူ့ကို တခြားအချိန်ကခိုင်းရင် သူလဲရှက်မှာပဲလို့... ဒါပေမဲ့ ခေါင်းထဲမှာတော့ နောက်အတွေးတစ်ခုဝင်လာတာက ပိုက်ဆံပေးတိုင်းတော့ သူကမှာမဟုတ်ပါဘူး... ကျောတောတောနဲ့ ဟေ့ ဂျန်ဂမ်ဆပ်.. ဒီမှာ ပိုက်ဆံ.. ကပြစမ်းဆိုရင်.. သူဘယ်ကမလဲနော်... ခုသူက သူ့ပရိတ်သတ်ကို ချစ်လို့ အထူးဖျော်ဖြေတာပဲ.... ပိုက်ဆံယူထားလို့တန်အောင် ကပြနေရရှာတယ်ဆိုတဲ့ အတွေးကို မတွေးသင့်ပါဘူး... ဘာပဲပြောပြော သဝန်တိုတာတော့ အမှန်ပဲ... တကယ်လို့ ဂျန်ဂမ်ဆပ်သာ ကျွန်မကို ချစ်ရေးဆိုခဲ့ရင် လုံးဝ လက်မခံဘူး... ကျွန်မလို စိတ်မျိုးနဲ့ ရင်မောရတာပဲ အဖတ်တင်မယ်... သူလဲ စိတ်ညစ်ရလိမ့်မယ်... သူ့ကို ချစ်လွန်းလို့ကို လက်မခံနိုင်တာ... (ဟဲ.. ဟဲ... အသားယူမိပြန်ပြီ... မေတ္တာပို့သခြင်းများကို အပြည့်အဝလက်ခံပါသည်... ဟိဟိ )...
အဲဒိလို သူကနေတုန်းက ကျွန်မ အော်ပြီးတော့တောင် အားမပေးမိဘူး... စိတ်မကောင်းလို့... သဝန်တိုလို့... ဒါပေမဲ့ သီချင်းတစ်နေရာအရောက်မှာ သူက ပရိတ်သတ်ဘက်ကို နားလေးစွင့်တဲ့ ပုံစံမျိုးလုပ်ပြပြန်တော့လဲ... သူ ပရိတ်သတ်အားပေးတာ ကြားချင်ရှာမှာပေါ့လေ... ငါက သူ့ရည်းစားမှ မဟုတ်တာ ဒီလို သဝန်တိုနေလို့လဲ မထူးဘူး... အနည်းဆုံး အားပေးသံလေးကြားရင် သူအားရှိတယ်လို့ စောစောက မေးဖြေကဏ္ဍမှာ သူပြောသွားတော့... သူ့ကို မရမဲ့အတူတူ သူ့ပရိတ်သတ်အနေနဲ့ အပြည့်အဝအားပေးတာပဲကောင်းပါတယ်... ဆိုပြီး အော်ပြီး အားပေးလိုက်ပါသေးတယ်... စိတ်ထဲက သူ့ကို အဲဒိသီချင်းနဲ့ကတာကို မြန်မြန်လဲ ပြီးစေချင်တယ်... ကိုယ်ကလဲ ကြည့်လဲကြည့်ချင်တယ်... ဘယ်လိုကြီးမှန်းကို မသိပါဘူး.. ဟိဟိ...
သီချင်းအလယ်လောက်မှာ သူ စင်ကို အမှောင်ချပြီး ပျောက်သွားသေးတယ်... နောက်တော့ ဘေးပေါက်ကနေ ပရိတ်သတ်ထဲက ပြန်ပေါ်လာပြန်ရော... ဒီမင်းသား ပရိတ်သတ်ထဲ ဆင်းရတာ တော်တော်ကြိုက်တယ်.. သူ့နောက်က စလုံးရဲတွေကတော့ အတော် အမြင်ကပ်နေမယ်... သူတို့အလုပ်ရှုပ်လို့... နောက် စင်ပေါ်ခဏတက်ပြီး... ညာဘက်က ၂၅ဝတန်ဘက်ထဲ အရှေ့ပိုင်းလူတွေထဲဆင်းသွားပြန်ရော... အဲဒိထဲကနေ အသက်ကြီးကြီး အန်တီကြီးတစ်ယောက်ကို ဆွဲခေါ်သွားပြီး သူနဲ့အတူ စင်ပေါ်မှာ တွဲကပါတယ်... အန်တီကြီးက ကိုရီးယားမကြီးပဲ ဖြစ်မယ်ထင်ပါတယ်.... အဲဒိအန်တီကြီးလဲ သေပျော်ပါပြီ... (အဲဒါမနာလို လို့ပြောတာပါ..ဟတ်... ဟတ်... ) အိုဇာတာ အတော်ကောင်း... ဒီလိုနဲ့ပဲ Sexy Back သီချင်းပြီးသွားပြီး မင်းသား စင်နောက်ပြန်ဝင်သွားပါတယ်...
သူဝင်သွားတဲ့ အချိန်မှာ သူခုတစ်လောဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတာကိုရိုက်ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုပြပါတယ်... သီချင်းတိုက်တာတွေဘာတွေပါ... အစီအစဉ်ညံ့တာတစ်ခုက အင်္ဂလိပ်စာတမ်းမထိုးပဲ တရုတ်စာတမ်းပဲထိုးတော့ ကျန်တဲ့ လူမျိုးတွေ အတွက် မတရားပါဘူး... အမှန်တော့ သူတို့ခိုတာပါ... ဟောင်ကောင် fan meeting မှာ ပြတဲ့ ဗွီဒီယိုကိုပဲ ပြန်ပြတာလဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်... ဗွီဒီယိုကလဲ ထစ်နေပါသေးတယ်... ထစ်တာမှ တော်တော်ကို ထစ်တာပါ... ကြည့်ရတဲ့ ပရိတ်သတ်က အတော်ကို ခံရခက်ပါတယ်... ဗွီဒီယိုထစ်သွားရင် ပရိတ်သတ်က... "ဟာာာာာာာာာာ............ " ဆိုပြီး အော်ကြတော့... အမှောင်ထဲကနေ မင်းသားအသံထွက်လာပါတယ်... ဗွီဒီယိုထဲမှာ ပြချင်တာက သူဟာ အမြဲတမ်းကြိုးစားနေပါတယ်ဆိုတာကို ရှင်းပြပါတယ်... မင်းသားဟာ ကျွန်မတို့နဲ့အတူ ဗွီဒီယိုထိုင်ကြည့်နေတယ်ဆိုတာ သိလိုက်ရတော့ စိတ်ထဲမှာပျော်ပါတယ်...အော် သူဟာ ပရိတ်သတ်ကို ဂရုစိုက်တဲ့ မင်းသားပါလားဆိုပြီးတော့လဲ အမှတ်ပေးမိပြန်ပါတယ်....
နောက်တော့ သူ ဒီ fan meeting အတွက် ရောင်းမဲ့ Photo shoot တွေပြပါတယ်... ဘာအိုက်တင်လုပ်လုပ်ကို ကြည့်ကောင်းနေတာပါပဲ... ချစ်စရာကောင်းနေတာပါပဲ... သူ ကုတ်အကျီင်္အနက် ဆံပင်အကောက်တွေကို ရှေ့ချထားတဲ့ပုံက လူကြီးဆန်ပြီး.. ဓာတ်ပုံထဲမှာလဲ ခပ်တည်တည်တွေ နေနေပင်မဲ့... မရိုက်ခင်တုန်းကတော့ ကလေးလေးတစ်ယောက်လို ရယ်မောပြီး "Go Go Go" ဆိုပြီး အော်သွားတာလေးကလဲ အပြစ်ကင်းတဲ့ ပုံလေးပေါက်ပါတယ်... ဒီလိုဆိုတော့လဲ သူကအသက် ၂၄နှစ်သာရှိသေးတဲ့ လူငယ်လေးတစ်ယောက်ပါပဲ... ကျန်တာတွေကတော့ ကိုရီးယားလိုတွေ ဘာပြောနေမှန်းကို မသိပါဘူး...
"I miss you guys... Everyone... I love you" ဆိုပြီး အသဲပုံလေး လက်ကလုပ်ပြသွားတာတော့ တစ်လုံးမကျန်နားလည်လိုက်လို့ အသဲထဲ အေးကနဲဖြစ်သွားတာပဲ... ဟတ်.. ဟတ်... (ကိုယ့်အကြိုက် မင်းသားအကြောင်းရေးနေလို့ မကြိုက်သူများ သည်းခံနားလည်ပေးကြပါရန်)... ကဲကဲ.. ဗွီဒီယိုလေး ရှူစားသွားကြပါ...
P.S အရမ်းတော့ မကြည့်နဲ့နော်... ခဏခဏလဲ ပြန်မကြည့်နဲ့... ဒီက သဝန်တိုတတ်တယ်... ဟဲ.. ဟဲ...
Posted by mabaydar at 3:35 AM 10 comments :
ဒီဂိမ်းကို သိခဲ့တာတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၁နှစ်ကျော်လောက် ကတည်းကပါ... သိပြီးသားလူတွေလဲ ရှိမှာပါ... ဒီနေ့တော့ အလုပ်မှာ အရမ်းအိပ်ငိုက်နေတာနဲ့ google ကနေ ဟိုရိုက်ဒီရိုက် လျှောက်ရှာရင်း ပြန်သတိရသွားလို့ပါ...
သရဲခြောက်တဲ့ ဟိုတယ်မှာ သင်တို့ တစ်ညလောက်သွားနေကြည့်ပါလား... ကျွန်မကတော့ နေပြီးပြီ... ၅ခါ ၆ခါလောက် ကြိုးစားပြီးတော့ ဟိုတယ်ထဲက ထွက်ပြီး ကားပေါ်ကို ကျွန်မတက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်... ဒီဂိမ်းကို ကစားမယ်ဆိုရင် Speaker ကိုလဲ အသံဖွင့်ထားမှ ပိုအရသာ ရှိမှာပါ... level3နဲ့5ရောက်ရင် အသံကို နားထောင်ပြီး ဖြေရှင်းရတဲ့ အခါတွေပါပါတယ်... Graphic တွေက အရမ်းကောင်းပြီး အသံတွေနဲ့ ပေါင်းလိုက်တော့ ကိုယ်တစ်ကယ် အဲဒိထဲရောက်နေသလိုခံစားရပါတယ်.. ပြီးတော့ အာရုံစိုက်ပြီးမှ ကစားလို့ရတဲ့အတွက်လဲ... တစ်ချက်တစ်ချက် လန့်လန့်သွားတတ်ပါတယ်... စစ ကစားချင်းကဆိုရင် ကြောက်လွန်းလို့ နှုတ်ခမ်းတွေတောင် တုန်ပါတယ်... နောက်မှ ဘေးက လူတစ်ယောက်နဲ့ တူတူကစားရတယ်... အဟီး... မကြောက်တတ်ရှာတော့ သရဲဂိမ်းကစားတယ်လေ...
အဲဒိ ဟိုတယ်က ညနေ၆နာရီကနေ မနက်၆နာရီအတွင်းပဲဖွင့်ပါတယ်... အော်... မှာလိုက်ပါရဲ့ ကြောက်တတ်ရင်တော့ မကစားနဲ့နော်... တာဝန်မယူဘူး... ဒါမှမဟုတ် ညဘက်မကစားရဲတဲ့ သူတွေအတွက် ကိုယ့် ကွန်ပြူတာက နာရီကို ညဘက်အချိန်ပြောင်းပြီး ညာဆော့လို့ရပါတယ်... အဟိ...
တကယ်လို့ မကစားတတ်ဘူးဆိုရင်တော့ ပြောပါ.. မဗေဒါ ပြောပြပါ့မယ်... ဒါပေမဲ့ ကစားတတ်မယ်ထင်ပါတယ်...
ကစားချင်တယ်ဆိုရင်တော့ www.hotel626.com မှာ သွားရောက် Check in ၀င်၍ ကစားနိုင်ပါတယ်...
ဟိုတယ်၆၂၆ မှာ သရဲနဲ့အတူ ကောင်းစွာ ပျော်မြူးနိုင်ကြပါစေ...
Posted by mabaydar at 3:56 AM3comments :
Posted by mabaydar at 2:30 AM 10 comments :
ပရိတ်သတ်ကို အရမ်းအလေးထားပြီး အမြဲတမ်း အရောတ၀င်နေတတ်တဲ့ မင်းသားလေး ဂျန်ဂမ်ဆပ်ရဲ့ စိတ်ကောင်းရှိမှုကို အခွင့်ကောင်းယူတဲ့ မိန်းကလေးတချို့ကြောင့် မင်းသားလေး အတော်ကို ၀မ်းနည်းစိတ်တိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်... သူဟာ လမ်းသွားနေလို့ နောက်က fan girl တွေ တကောက်ကောက်လိုက်လာရင်လဲ စိတ်မဆိုးခဲ့သူ... fan girl တွေ ပို့သမျှ လက်ဆောင်တွေကိုလဲ တမြတ်တနိုး သုံးတတ်သူ... You are beautiful ကားရိုက်နေစဉ်အတွင်း သူ့ကို ပို့သမျှ လက်ဆောင်တွေထဲမှာမှ တန်ဖိုးကြီးလက်ဆောင်တွေထက် သူ့ပုံတွေနဲ့ အလှဆင်ပြီးပင်ပင်ပန်းပန်းလုပ်ထားတဲ့ စာအုပ်လေးထဲမှာ သူရုပ်ရှင်ရိုက်နေလို့ ပျက်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းစာတွေကို fan girl တွေက ပင်ပင်ပန်းပန်း ကူးပေးခဲ့တာကို လက်က တကိုင်ကိုင်နဲ့ ဒီလက်ဆောင်လေးကို အကြိုက်ဆုံးပဲ အရမ်းအသုံးဝင်လို့ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လို့ ပြောခဲ့သူ တစ်ယောက်ပါ... (ကျွန်မကိုယ်တိုင်အဲဒိဗွီဒီယိုကို youtube မှာကြည့်လိုက်ရပါတယ်.. ခုတော့ copyright issue ကြောင့် ကြည့်လို့မရတော့ပါဘူး)...
သူ့ကို ကျွန်မ အရင်ကားတွေမှာ ကြိုက်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့... တခြားမင်းသားတွေလိုပဲ ကြိုက်လိုက် မကြည့်တော့ရင် မေ့သွားလိုက်ပါပဲ... နောက်ပိုင်း သူ့ရဲ့ အပြင်က ဖော်ရွေတဲ့ character လေးကိုပါ သဘောကျလာလို့ တခြားမင်းသားတွေထက် ပိုကြိုက်ခဲ့ရပါတယ်...
သူဟာ အရင်ထဲက ရုပ်ရှင်လောကထဲမှာ ရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ You are beautiful ကားအပြီးမှာ တဟုန်ထိုးနာမည်ကျော်ကြားလာခဲ့ပါတယ်... ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်း သူ့ရဲ့ အပြင်ဘ၀အစစ်မှာတော့ အသက် ၂၄ နှစ်သာရှိသေးတဲ့ လူငယ် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား တစ်ဦးပါပဲ... သူ စကာင်္ပူမှာနေခဲ့တဲ့ နောက်ဆုံးရက်မှာ ရှော့ပင်းထွက်အပြီး East coast ကို သွားခဲ့ပါတယ်... အဲဒိအချိန်မှာ စကာင်္ပူက fan တွေကလဲ သူ့ကို နားလည်ပြီး private time ပေးတဲ့အနေနဲ့ သူ့အနားကို တစ်ယောက်မှ မကပ်ပဲ အဝေးကပဲ ကြည့်ခဲ့ကြပါတယ်... သူတစ်ယောက်ထဲ ပင်လယ်ကြီးကို ငေးပြီး သဲပေါ်မှာ ထိုင်နေတဲ့ ဓာတ်ပုံကိုကြည့်ပြီး ကျွန်မ စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်... တစ်နေကုန် သွားလေရာ လူတွေဝိုင်း ကင်မရာရှေ့မှာ သူ့ကိုယ်သူ ထိန်းနေရ လူတွေကို ရီပြရနဲ့ အတော်လေးကို စိတ်ရှုပ်ပင်ပန်းမှာပါ... (ဒါပေမဲ့ သူကိုရီးယားပြန်ရောက်တော့ သူ official website မှာ သူအဲဒိနေ့က စိတ်ညစ်နေတာမဟုတ်ကြောင်း သူ့ fan girl တွေ သူ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မှာစိုးလို့ အဲဒိနေ့က beach မှာ သူဘာတွေတွေးနေတယ်ဆိုတာကို ရီစရာအနေနဲ့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်)
သူကိုရီးယားကို ပြန်သွားပြီး သူ့ official website မှာ 08/05/2010 တုန်းက သူကိုယ်တိုင်ရေးပြီး တင်ထားတဲ့ မတ်စေ့လေးကိုတွေ့တော့လဲ သူ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပြန်တယ်...
Korean to English translation credit to Muse...
(Foralong time ago I thought I should protect myself more and more..
အရင်တုန်းက ကျွန်တော့်ကိုကျွန်တော် ပိုပြီး ကာကွယ်သင့်တယ်လို့ ထင်ခဲ့တယ်...
Everyone is likely to have the precious moments of school days and memories with friends..
လူတိုင်းမှာ ကျောင်းတုန်းက အမှတ်တရတွေ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ ပျော်ခဲ့တဲ့ အကြောင်းတွေ ရှိနေကြတတ်ပါတယ်...
Such as skipping classes and eating up lunchbox secretly...
ဥပမာ... အတန်းလစ်တာ ၊ အတန်းထဲမှာ ထမင်းဘူးခိုးစားတာ တွေပေါ့..
Being scolded by teacher while dozing off in class..
အတန်းထဲမှာ အိပ်ငိုက်လို့ ဆရာဆူတာ ခံရတာ တွေရှိကြမှာပဲ...
Writingalove letter to an unrequited friend in your neighbor class...
ဘေးအတန်းက တိတ်တိတ်လေး ချစ်ရတဲ့ သူငယ်ချင်းကို ရည်းစားစာရေးတာတို့ ဘာတို့ပေါ့...
I don"t have those common memories which is really natural to everybody
ကျွန်တော့မှာတော့ လူတိုင်းမှာ လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ရှိနိုင်တဲ့ အဲဒိ သာမာန် အမှတ်တရလေးတွေ မရှိဘူး...
When my peers were holdingapen, I was holdingamicrophone
သူများတွေ ဘောပင်ကိုင်နေတဲ့အချိန်မှာ ၊ ကျွန်တော်က မိုက်ကရိုဖုန်းကိုင်နေရတယ်...
When my fellows of the same grade were looking through the textbook and the teaching aids, I was looking through my script..
အတန်းဖော်တွေက စာအုပ်ကိုကိုင်ပြီး AIDS အကြောင်း သင်နေကြတဲ့ အချိန်မှာ၊ ကျွန်တော်ကတော့ ရုပ်ရှင် ဇာတ်ညွှန်းတွေကို ကြည့်နေရတယ်...
Definitely I don"t regret after so longatime.
ဒါပေမဲ့ ဒီလောက်ကြာကြာ နေသားကျနေမှတော့ ကျွန်တော် နောင်တမရပါဘူး...
Maybe I just found my way to go earlier than others..
တခြားလူတွေထက် ကျွန်တော်က ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တာကို စောပြီးတွေ့သွားတယ်လို့ပဲ ယူဆပါတယ်...
Havingadream of an actor for life..
မင်းသားဖြစ်ချင်ခဲ့တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ အိပ်မက်...
That meansaso great deal to me..
မင်းသားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက် ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အကောင်းဆုံးရလဒ်ပါပဲ...
So.. after jumping overafence of adult-thing, I wanted to keep mine.
ဒီတော့... လူကြီးဆိုတဲ့ စည်းကို ကျွန်တော် ကျော်ခုန်ခဲ့ပြီးမှတော့ ကျွန်တော် ရထားတာကို ကျွန်တော် ထိန်းထားချင်ပါတယ်...
After entering the Univ, somebody attended as my substitute..
တက္ကသိုလ်ရပြီးနောက်ပိုင်းမှာ... ကျွန်တော့အစား တခြားလူက လက်ချာတွေ လိုက်ပေးရတယ်..
Whenever I neededahair cut, somebody drove it for me
ကျွန်တော် ဆံပင်ညှပ်စရာလိုတိုင်း... တစ်ယောက်ယောက်က ကားနဲ့ လိုက်ပို့ပေးနေရတယ်...
Whenever I was waiting foracasting, somebody recommended me the script with priority.
ကျွန်တော်ကားရိုက်ဖို့ စောင့်နေတိုင်း.. တစ်ယောက်ယောက်က script ကို ကြိုဖတ်ပြီး recommend ပေးရတယ်...
That was my life lived by somebody instead of me...
ဒါတွေအားလုံးက ကျွန်တော်မဟုတ်တဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ တခြားလူတွေကို အားကိုးပြီးနေနေရတဲ့ ဘ၀ပဲ...
So much meaningless, isn"t it?
I had found the way to go faster than others in my school days,
ကျွန်တော်က ကျောင်းသားဘ၀မှာပဲ သူများထက် မြန်မြန် လမ်းကြောင်းရှာတွေ့ခဲ့တယ်...
Now walking through the way, I wanna keep my life more than ever.
ခု အဲဒိလမ်းကြောင်းကို လျှောက်နေချိန်မှာလဲ... ကျွန်တော့်ဘ၀အမှန်ကို ထိမ်းထားချင်တယ်...
But today.. After reading an article from today, I thoughtalot..
ဒါပေမဲ့.. ဒီနေ့... ဒီနေ့ဆောင်းပါးကို ဖတ်ပြီးတော့ ကျွန်တော် အများကြီး တွေးဖြစ်တယ်... (ဘာဆောင်းပါးလဲတော့ မသေချာပါ... သူ့အကြောင်း မကောင်းရေးလားတော့မသိ)
What is important.. life of myself living as me.. or life of an actor living as an actor?
ဘာက ကျွန်တော့အတွက် အရေးကြီးသလဲ... ကျွန်တော့ဘ၀ကို ကျွန်တော့လိုပဲ နေတာလား... ဒါမှမဟုတ်... မင်းသားတစ်ယောက်ရဲ့ ဘ၀ကို မင်းသားလို့နေရမှာလား...
I just did hate to sneak around, do something with hiding my face..
လူတွေကြားထဲ ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်သွားရတာ... တစ်ခုခုလုပ်ရင် မျက်နှာကွယ်ပြီးလုပ်ရတာတွေကို ကျွန်တော် အရမ်းမုန်းတယ်ဗျာ...
Just wanna walk around honorably and openly.. Now it"s not easy..
ရှင်းရှင်းနဲ့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း အိနြေ္ဓရှိရှိပဲ လမ်းပေါ်မှာ လျှောက်သွားချင်တယ်... ဒါပေမဲ့ ခုတော့ မလွယ်တော့ဘူး..
Do you remember what I saidafew days ago?
ကျွန်တော် လွန်ခဲ့တဲ့ ရက်တွေက ပြောခဲ့တာ မှတ်မိသေးလား..
From time unknown.. Facing camera lens is more frequent rather than facing people"s eyes..
ဘယ်အချိန်ကတည်းက ကျွန်တော်အတွက် ကင်မရာ lens တွေကို မျက်နှာချင်းဆိုင်နေရတာ လူတွေရဲ့ မျက်လုံးကို မျက်နှာချင်းဆိုင်ရတဲ့ အချိန်ထက် များနေလဲ မသိတော့ဘူး..
Now.. Even I didn"t realize or guessing something, Camera lens are looking at me first..
ခုတော့ဗျာ... ကျွန်တော် သတိမထားမိလိုက်တဲ့ အချိန်တွေမှာတောင် ကင်မရာ ပြောင်းတွေက ကျွန်တော့ကို အရင်ကြည့်နေကြပြီ...
But.. I"m not afraid of it.
ဒါပေမဲ့.. ကျွန်တော်ကြောက်လို့ပြောနေတာ မဟုတ်ပါဘူး...
I AMafair and good guy..
ပြီးခဲတဲ့ အမေများနေ့က သူ့မိသားစုနှင့်အတူ..(သူ့ဘေးမှာထိုင်နေတဲ့ အနီနဲ့က သူ့အမေ)
Just today I feelalot more responsibilities..
ဒီနေ့လေးတစ်ရက်ပဲ (မင်းသားဖြစ်ရတာ) အရမ်းတာဝန်ကြီးတယ်လို့ ခံစားနေရလို့ပါဗျာ....
And most of all, all of you eels" comments letter-by-letter make me stronger..
နောက်ပြီး အပြောချင်ဆုံးကလဲ... ကျွန်တော့်ကို အားပေးတဲ့ ပရိတ်သတ်ရဲ့ ကွန်မန့်တွေ စာတွေကတော့ ကျွန်တော့်ကို ခံနိုင်အောင် လုပ်ပေးနေပါတယ်...
တကယ်ပြောတာနော်... ကျေးဇူးပဲ Cri (သူက သူ့fun တွေကို eels (ငါးရှဉ့်), Cri လို့ ခေါ်တတ်တယ်.. ဘာလို့အဲလိုခေါ်လဲဆိုတာလဲ အကြောင်းရှိတယ်... သူတစ်ယောက်ထဲ fan တွေကို သူ့နည်းသူ့ဟန် ချစ်စနိုးနဲ့ အဲလို ခေါ်တာ)
ဒါပေမဲ့ မကြာသေးခင်ကမှ ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အဖြစ်အပျက်အလေးကြောင့် ဒီလောက် သည်းခံလိုက်လျောနေတဲ့ မင်းသားလေးခမျာ အတော်လေး စိတ်ရှုပ်ခဲ့ရပါတယ်...
သူတက်နေတဲ့ HanYang တက္ကသိုလ်မှာ တစ်နှစ်တစ်ခါ ကျောင်းသားတွေစုပြီး Launge H ဆိုတဲ့ ပွဲလေးလုပ်ပြီး ရန်ဘုံငွေသဘောမျိုး ရှာတတ်တယ်ထင်ပါတယ်... (မသေချာပါ..) အဲဒိ ပွဲမှာ ဂျန်ဂမ်ဆပ်ဟာ သူနာမည် မကျော်ခင်ကတည်းက တခြား organizer ကျောင်းသားတွေနဲ့ အတူ organizer အဖြစ် အရင်နှစ်တွေကလဲ ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်... အရင်နှစ်တွေတုန်းက သူ့အတွက် ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ပါလို့ရခဲ့တဲ့ ပွဲလေးဟာ ဒီနှစ်မှာတော့ သူ့အတွက် စိတ်ရှုပ်ခဲ့ရပါတယ်...
ပွဲက ၁၈ ရက်ကနေ ၂၀ ရက်အထိလုပ်မှာပါ... ပွဲအတွက် ၁၆ရက်နေ့မှာ သူတို့ တက္ကသိုလ်မှာ ပိုစတာကပ်တာတွေနဲ့ လုပ်စရာရှိတာတွေကို ဂျန်ဂမ်ဆပ်ကိုယ်တိုင် ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ ပါဝင်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်... အဲဒိအတွက် သူ့ရဲ့ fan တွေက မင်းသားကို လွတ်လွတ်လပ်လပ် အလကား တွေ့ရတော့ လာပြီး ဓာတ်ပုံရိုက်ကြ ဗွီဒီယိုရိုက်ကြ လုပ်ကြပြန်ပါတယ်... ဒီတော့ သူက အလုပ်က ပင်ပန်းနေရတဲ့ အထဲ စိတ်ကရှုပ်လာမယ်လို့ ကျွန်မထင်မိပါတယ်... ကျွန်မသာဆို သူ့လို အေးဆေးတောင် မေတ္တာရပ်ခံနိုင်ပါ့မလား မသိဘူး... သူကတော့ အဲဒိ ဓာတ်ပုံရိုက်တဲ့သူတွေကို မရိုက်ဖို့ ပြောပါတယ်.. ဒါပေမဲ့ ဆက်ရိုက်ကြပါတယ်...
နေရာက တက္ကသိုလ်ထဲမှာ... သူက အဲဒိ တက္ကသိုလ်က ကျောင်းသားတစ်ယောက်အနေနဲ့ပဲ ရှိချင်နေတာပါ... အဲဒိ ဗွီဒီယိုကြည့်လို့ရမယ့်နေရာကို တော့ ကျွန်မမပြောတော့ပါဘူး... မင်းသားက ပြန်မအော်ပင်မဲ့ မျက်နှာက တော်တော်တည်နေပြီး သူလုပ်စရာရှိတာကိုပဲ မြန်မြန်လုပ်နေပါတယ်... ပြီးတာနဲ့ ဘယ်သူ့ကိုမှလဲ စကားမပြောတော့ပဲ ခပ်ဆက်ဆက် နောက်တစ်နေရာကို ထွက်သွားပြီး ပိုစတာကပ်ပါတယ်... သူက ကျောင်းသားအနေနဲ့ ရှိချင်ခဲ့လို့လားမသိဘူး... ဘေးမှာ သူ့မန်နေဂျာကိုတောင် မတွေ့မိပါဘူး... အမှန်တော့ သူ့ကို ခုလို privacy မရှိ လိုက်ရိုက်နေတာ.. fan တွေလဲ ဖြစ်နိုင်သလို.. သူ့ရဲ့ anti fan တွေကလဲ သူဘယ်အချိန်အမှားလုပ်မလဲဆိုတာ လိုက်ကြည့်နေတာ သူခံနေရပါတယ်... နောက်ပြီး paparazzi တွေလဲ ပါတဲ့အတွက်.. ဘယ်သူက ရန်သူ ဘယ်သူက မိတ်ဆွေ သူ့ခမျာမသိရှာတော့ .. ကင်မရာနဲ့ ချိန်ခံရတိုင်း အနေအထိုင် ဆင်ခြင်နေရရှာတော့ သူစိတ်ညစ်မယ်ဆိုတာ ကျွန်မခံစားလို့ရပါတယ်...
အဲဒိညမှာတော့ ဂျန်ဂမ်ဆပ် official website မှာ မင်းသားက ခုလို မတ်ဆေ့စ်လေးကို တင်ထားတာကို ၀မ်းနည်းစွာတွေ့ရပါတယ်တဲ့...
English translation from CriJ Staff
ကျေးဇူးပြုပြီး... တောင်းပန်ပါတယ်!!!!!.... ကျွန်တော်က ဓာတ်ပုံမရိုက်ပါနဲ့ဆိုရင် ဆက်ပြီး မရိုက်ကြပါနဲ့တော့... တကယ်လို့ ဆက်လုပ်နေမယ်ဆိုရင်....
ကျွန်တော် ခုလို အပြင်ကို ဘယ်တော့မှ မထွက်တော့ဘူး.... ဒီလိုဆို ခင်ဗျားတို့ရဲ့ ဓာတ်ပုံထဲလဲ ကျွန်တော် ဘယ်တော့မှ မပါတော့ဘူးပေါ့..
Don"t make meabad person
ကျွန်တော့ကို လူဆိုးဖြစ်အောင် မလုပ်ကြပါနဲ့ဗျာ...
ဒီလိုလေးရေးထားတယ်ဆိုတာ သိရတော့ သူ့အတွက် စိတ်မကောင်းဘူး...
သူ့အကြောင်းပြောတဲ့ ဖိုရမ်တွေထဲမှာတော့ တချို့ကလဲ သူ့အတွက် မင်းသားဆိုတဲ့ လမ်းကို ရွေးပြီးရင် ကင်မရာတွေနဲ့ ရင်ဆိုင်ရတာကို ခံနိုင်ရည်ရှိအောင် ပြင်ဆင်ထားသင့်တယ်တဲ့... ဒါပေမဲ့ မင်းသားကို အပြစ်ပြောနေကြတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး... ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူက တခြားမင်းသားတွေလို ဟိတ်ကြီး ဟန်ကြီးနဲ့ မနေချင်ပဲ လူတွေကြားမှာ ကူးလူဆက်ဆံချင်တဲ့ မင်းသားလေး ဖြစ်နေလို့ပါပဲ... အဲဒါကြောင့်မို့ သူ့ရဲ့ fan တွေက သူ့အတွက် ဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်း အားလုံးကိုလဲ သူ့ fan စစ်ရင် အဲဒါကို လိုက်နာဖို့ လက်ဆင့်ကမ်းခိုင်းတယ်... fan တွေအနေနဲ့ မင်းသားရဲ့ သွားတာ လာတာ နေတာ ထိုင်တာ စားတာ သောက်တာကို ချစ်လို့ ခင်လို့ အချိန်ပြည့်ကြည့်ချင်မိလို့လဲ ဒီလို မင်းသားမှာ နေရကျပ်ရတာ... ဒါပေမဲ့ မင်းသားအတွက် အဲဒိ အနေရကျပ်တဲ့ အချိန်လေးတွေ လျော့သထက် လျော့နိုင်အောင် ကူညီပေးကြဖို့ပါပဲတဲ့... ကျွန်မစိတ်ထင်လဲ သူ့ကိုသာ ကင်မရာတွေနဲ့ မချိန်နေရင် သူဟာ ပရိတ်သတ်တွေနဲ့ ယခုထက်တောင် ပိုပွင့်လင်းရိုးသားပြီး ရင်းရင်းနှီးနှီးဆက်ဆံနိုင်မယ်ထင်ပါတယ်...
သူက ပရိတ်သတ်ကို သူငယ်ချင်းလို ခင်ချင်တဲ့ မင်းသား... ပရိတ်သတ်က သူ့ကို ကင်မရာတွေထဲက ကြည့်နေတာထက် မျက်လုံးချင်းဆုံချင်တဲ့ မင်းသား... သူ့ပရိတ်သတ်ဘယ်လိုလူတွေလဲဆိုတာကို သိချင်လွန်းလို့ လေဆိပ်မှာတောင် ပြန်ဗွီဒီယို ရိုက်ခဲ့တဲ့ မင်းသား... ရဲကို လက်ကာပြီးတော့တောင် ပရိတ်သတ်နား ကပ်ခဲ့တဲ့ မင်းသား... ပရိတ်သတ်က အော်ပြောတဲ့ စကားသံ သူကြားရင် ပြန်အော်ဖြေတတ်တဲ့ မင်းသား... သူ့လောက် ပရိတ်သတ်အပေါ် ကောင်းနေတဲ့ မင်းသားကို ခုလို စိတ်ညစ်သွားအောင် မလုပ်သင့်ဘူး... တော်ပါသေးရဲ့... သူစကာင်္ပူလာတုန်းက သူ့ဟိုတယ်မှာ stalker သွားလုပ်မလို့ စဉ်းစားမိသေးတယ်... အွန်လိုင်းမှာ ၀ါသနာတူ အဖော်တွေရှိတယ်... ဒါပေမဲ့ အဲဒိတုန်းကလဲ သူ့ privacy ကို စဉ်းစားမိလို့ ကျွန်မ မလုပ်ခဲ့ဘူး... လေဆိပ်မှာတုန်းကလဲ သူနာညီးမှာစိုးလို့ သူကိုယ့်ရှေ့တည့်တည့်ရောက်နေတာတောင် မအော်ခဲ့ဘူး... သူ ကျော်သွားမှ မခံနိုင်လွန်းလို့ here here here လို့ အော်မိတာ.. သူနားညီးလောက်မယ်တော့ မထင်ပါဘူး...
ဒါပေမဲ့ ကျွန်မ အခုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီ... နောက်တစ်ခါ သူ့ကို တွေ့ခွင့်ရအုံးမယ်ဆိုရင် ကျွန်မဘယ်တော့မှ ဗွီဒီယို ကင်မရာ သယ်မသွားတော့ဘူး... သူ့ကို မျက်လုံးနဲ့ပဲကြည့်မယ်... ရင်ထဲမှာပဲ record လုပ်ထားလိုက်တော့မယ်ရှင်....
မင်းသားရဲ့ privacy ကို နားလည်သောအားဖြင့် အဲဒိနေ့က ဗွီဒီယိုတွေအွန်လိုင်းမှာတွေ့တာကို မရှယ်တော့ပါဘူး... ခုအောက်က ပုံလေးတွေကတော့ သူ့ official facebook ကနေ ရယူထားပါတယ်..
Photo credits to Jang Keun Suk's official facebook...
ဒီပုံလေးကတော့ သူ ခုလို နာမည်မကြီးခင် မနှစ်က Launge H ပွဲမှာ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စုရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးပါ... (သူ့ကို ရှာလို့ တွေ့ကြလား)
အောက်ကပုံတွေကတော့ ဒီနှစ်ပွဲက ပုံတွေပါ...
အလုပ်တွေ ကူလုပ်ပေးရင်း ပင်ပန်းနေတဲ့ မင်းသားလေး...
ကျောင်းပွဲ မစခင်မှာ organizer တစ်ယောက်အနေနဲ့ အလုပ်တွေလုပ်နေတဲ့ မင်းသား...
တကယ့်ပွဲနေ့မှာ လာတဲ့ မင်းသား... (ဒီနှစ်တော့ အဲဒိပွဲလေးရဲ့ လက်မှတ်က သူ့ကျေးဇူးကြောင့် ချက်ချင်းကုန်သတဲ့)
Posted by mabaydar at 3:55 AM 20 comments :
Posted by mabaydar at 2:49 AM 17 comments :
ရေဒုက္ခရောက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်သူ ပြည်သားတွေအတွက် တတ်အားသရွေ့ အလှူထည့်လိုက်ပါတယ်... မဗေဒါဘလော့ကို လာဖတ်တဲ့ စာဖတ်သူတွေကိုလဲ တတ်နိုင်သမျှ လှူဖို့ တိုက်တွန်းပါတယ်...
အားလုံးကိုလဲ မဗေဒါရဲ့ ကုသိုလ်လေးတွေ မျှဝေလိုက်ပါတယ်...
ဤပြုရသော ကုသိုလ်ကြောင့် လိုအပ်သော ဆန္ဒအကုန် အဆင်ပြေချောမောစွာ ပြည့်ရပါလို၏... (ဒီလိုဆုတောင်းလိုက်တော့ တစ်ခွန်းထဲနဲ့ အားလုံးပါသွားရော...)
အမျှ... အမျှ... အမျှ... ယူတော်မူကြပါကုန်လော့....
Posted by mabaydar at 6:33 AM 11 comments :
အရင်က ဘလော့တွေပေါ်မှာ သူများတွေ နာမည်တူကိစ္စတွေဖြစ်တာ တွေ့ခဲ့ဖူး ကြားခဲ့ဖူးပင်မဲ့ တနေ့မှာ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်လာလိမ့်မယ်လို့ မထင်ထားခဲ့မိဘူး...
ကျွန်မ မဗေဒါဆိုတဲ့ နစ်နိမ်းကို သုံးခဲ့တာ ၂၀၀၄ ခုနှစ်လောက်ကတည်းကပါ... ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ဘလော့အကောင့်ကို စပြီးဖွင့်တော့လဲ မဗေဒါဆိုတဲ့ နာမည်နဲ့ပဲဖွင့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်... ဒါပေမဲ့ တကယ်တမ်း ဘလော့ကို မှန်မှန်ရေးလာတာကတော့ ၂၀၀၇ စက်တင်ဘာလကမှ စတင်ခဲ့တာပါ... အဲဒိအချိန်တုန်းက ကိုယ်နဲ့တူတူ တချိန်တည်းလောက်မှာ စရေးကြတဲ့ ဘလော့ဂါတွေဆိုရင် မဗေဒါကို သိကြတဲ့သူများပါတယ်...
မဗေဒါဆိုတဲ့ ကလောင်အမည်နဲ့ဘလော့ပေါ်မှာ စာတွေရေးခဲ့သလို... တခြား ဘယ်အကောင့်ဖွင့်ဖွင့်လဲ mabaydar ဆိုတဲ့ နစ်က available ဖြစ်တာ များတဲ့အတွက်ရော... အဲဒိ နာမည်လေးကို ကိုယ်က အဓိပ္ပါယ်ရှိရှိနဲ့ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်လဲ အင်တာနက်ပေါ်မှာ ဘယ်အကောင့်ဖွင့်ဖွင့် ကိုယ့်နာမည်အရင်းထက် mabaydar ဆိုတာကို အရင်ဆုံး သတိရတတ်တာ ကျွန်မအကျင့်ပါ... ကျွန်မ သူငယ်ချင်းတွေက နာမည်က တောဆန်လိုက်တာ... အဖွားကြီး နာမည်... ဘာစိတ်ကူးနဲ့များပေးတာလဲ... ဆိုပြီး လှောင်ပြောင်ခံခဲ့ရရင်တောင် ကိုယ့်ယုံကြည်ချက်နဲ့ကိုယ်မို့ အပြုံးမပျက်ခဲ့သလို ပြောင်းလဲပြစ်ဖို့ စိတ်ကူးလဲ မရှိခဲ့ရပါဘူး...
မဗေဒါဆိုတဲ့ နစ်ကို တစ်ဆုတ်နစ်နစ် နှစ်သက်ရတဲ့ အကြောင်းရင်ကိုလဲ... ၂၀၀၈ စက်တင်ဘာ ၁၇ ရက်နေ့မှာ တင်ခဲ့တဲ့ "မဗေဒါ ဆိုရာဝယ်...." ဆိုတဲ့ ပိုစ့်မှာလဲ ရှင်းလင်းခဲ့ဖူးပါတယ်...
အရင်က အမြဲတမ်း လူသုံးနည်းခဲ့လို့ ဘယ်မှာပဲ အကောင့်ဖွင့်ဖွင့် အားလပ်နေခဲ့တဲ့ မဗေဒါနစ်ဟာ.. ခုဆိုရင် ဘလော့ပေါ်မှာတင် နောက်တစ်ယောက်ထပ်ပေါ်လာပါပြီ... သူကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃လလောက်က သူ့ဘလော့စဖွင့်ကတည်းက စီဗုံးမှာ နာမည် available မဖြစ်လို့ ကြည့်ရင်းနဲ့ ဟောဒီက မဗေဒါရဲ့လျှို့ဝှက်ချက် ဘလော့ဆီကို ရောက်လာခဲ့ကြောင်းနဲ့... သူဟာ ယခုဆိုရင် www.mabayda.blogspot.com ဆိုပြီး ဘလော့တစ်ခုကို တည်ထောင်ထားကြောင်း လာရောက် အကြောင်းကြားသွားတဲ့ နော်ဝေးက အစ်မတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်...
နာမည်ပဲဖြစ်စေ... နစ်နိမ်းပဲဖြစ်စေ... ကလောင်အမည်ပဲဖြစ်စေ အားလုံးက ပညတ်ချက် နာမ်စားတွေချည်းပါပဲ... အဲဒိအတွက် ဒီဟာက ငါပဲပိုင်တယ်ဆိုပြီး အတ္တစိတ်စွဲ ကြီးမနေသင့်တဲ့အတွက် အော်... လောကမှာ နာမည်တူမရှား လူတူမရှားဆိုတာကိုလဲ နှလုံးမူပြီး အကျယ်အကျယ် ဘာမှ သိပ်မပြောခဲ့ပါဘူး...
ဒါပေမဲ့ ယခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျွန်မ စိုးရိမ်ခဲ့ရတဲ့ ပြဿနာက စလာပါတယ်... ကျွန်မဟာ တစ်ခြားဘလော့တွေကို ရောက်ဖြစ်ရင်တောင် ခြေရာချန်ခဲပါတယ်... ဒါပေမဲ့ တခြားဘလော့တွေရဲ့ စီဗုံးတွေမှာ "မဗေဒါ"ဆိုတဲ့ နာမည်တွေနဲ့ တွေ့လာရတဲ့ အပြင် ထင်တဲ့အတိုင်းပဲ လူမှားကြတာကိုလဲ တွေ့ရပါတယ်...
ကျွန်မအတွက် ကျွန်မရေးခဲ့တဲ့ စာတွေ ကွန်မန့်တွေကို တာဝန်ယူနိုင်ပင်မဲ့... ယခုလိုမျိုး လူမှားပြီး ကျွန်မရေးတယ်လို့ထင်တာကိုတော့ တာဝန်မယူနိုင်ပါဘူး... အထူးသဖြင့်တော့ ဘလော့စာမျက်နှာပေါ်က ကျွန်မ မရေးတဲ့ ပိုစ့်တွေအတွက် လူမှားပြီး ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်မှာကိုပါ... ကျွန်မရဲ့ နာမည်တူတစ်ယောက်ရေးတဲ့ စာကို ကျွန်မရေးတယ်ဆိုပြီး ရောထွေးနေမှာကို မလိုလားပါဘူး... ကျွန်မဘလော့က ကျွန်မရေးတဲ့ စာတွေကို ကိုယ့်ဟာကိုယ်တာဝန်ယူရမှာမို့လို့ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်ရေးချင်စိတ်ဖြစ်မိတဲ့ စာတွေကိုတောင်မှ မရေးပဲ မြိုသိပ်ခဲ့ရတာပါ...
ထိုအစ်မက ဆီဗုံးမှာ "မဗေဒါ" ဆိုပြီး မြန်မာလိုပဲပေါင်းတဲ့အတွက် www.mabayda.blogspot.com ကို မရောက်ပဲ တစ်ချို့ google ကနေပြန်ရှာပြီးရောက်လာသူတွေက ဟောဒီက www.mabaydar.blogspot.com ကိုပဲ ရောက်လာပြီး ဟောဒီက မဗေဒါလို့ပဲထင်ကြတာပါ... တစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေ မဗေဒါဘလော့ကို ကြော်ငြာပေးသလိုဖြစ်နေတဲ့အတွက်တော့ ကျေးဇူးတင်ရအုံးမယ်လို့ သူငယ်ချင်းတွေက နောက်ကြပင်မဲ့... ကျွန်မကတော့ စိတ်ထဲ အနေရခက်ခဲ့တာ အမှန်ပါပဲ... လူမှားတဲ့သူတွေကို ပြန်ရှင်းပြနေရတာလဲ ကျွန်မကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်...
ဒီတော့ အိမ်က မိသားစုနဲ့ သူငယ်ချင်းတစ်ချို့က အကြံပေးတာကတော့ မဗေဒါဆိုတဲ့ နာမည်နောက်ကနေ အညွှန်းစာလုံးတစ်ခုကို လိုက်ဖို့ပါပဲ... ဆရာဇော်ဂျီရဲ့ "ဗေဒါလမ်း" ကဗျာထဲက မဗေဒါကို ရည်ညွှန်းပြီးပေးခဲ့တဲ့ အတွက်... ကျွန်မနစ်ကို " မဗေဒါ(ဗေဒါလမ်း)" လို့ ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်ဖို့ အကြံပေးကြပါတယ်.. အမှန်အတိုင်း ၀န်ခံရရင် ၆နှစ်လုံးသုံးလာတဲ့ ကျွန်မနာမည် မဗေဒါကို မဗေဒါ ဆိုတာလေး အတိုင်းပဲ ပိုနှစ်သက်ပါတယ်... ယခုမှ ဒီလိုပြောင်းရမယ်ဆိုတော့ စိတ်မကောင်းတာတော့ တကယ်ပါပဲ... ဒါပေမဲ့ တကယ်လို့သာ တခြားနည်းမရှိပဲ ဒီနည်းပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့ နောင်တစ်ချိန် ကျွန်မဘယ်ဘလော့ကိုပဲလည်လည် ဆီဗုံးမှာ ဖြည့်ရင် အဲလိုပဲ အရှည်ကြီးဖြည့်ရတော့မှာပါ... ဘလော့ဂါ ပရိုဖိုင်းမှာလဲ သွားရောက်ပြင်ရတော့မှာပါ...
ဒိအပြင် ကျွန်မသုံးသမျှ ၀က်ဆိုဒ်၊ ဖိုရမ်၊ အကောင့် အားလုံးကို အဲလိုလိုက်ပြောင်းရတော့မယ်... ဒါမှမဟုတ်ရင်လဲ မဗေဒါဆိုတဲ့ နာမည်ကိုပဲ လုံးဝပြောင်းလိုက်သင့်သလားဆိုတာ... မဗေဒါ့ စာတွေကို လာဖတ်နေတဲ့ စာဖတ်သူတွေနဲ့ ဘလော့ဂါ မောင်နှမတွေသာ အကြံပေးကြပါတော့... ကျွန်မဘလော့ကို လာဖတ်တာ silent readers များတယ်ဆိုတာ ကျွန်မဘလော့ traffic ကို google analytics မှာ ကြည့်ရင် သိပါတယ်... အဲဒိအတွက် ဒီတစ်ခါတော့ silent readers များ မဗေဒါကို ကွန်မန့်မှာ အကြံဥာဏ်လေးပေးပြီး ကူညီဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်...
ဒါတင်မကသေးပါဘူး... ကြုံလို့ တစ်ပါတည်း ပြောပါရစေ... ကိုယ့်နာမည် mabaydar ကို google မှာ ရိုက်ရှာကြည့်တော့ Search result page 11 လောက်မှာမြန်မာဂေး ၀က်ဆိုဒ်ဖိုရမ် တစ်ခုမှာလဲ မဗေဒါ နာမည်နဲ့ ရေးနေတဲ့ လူတစ်ယောက်ကို သွားတွေ့ပါတယ်... ဒါကို သိတာကြာပါပြီ... ဒါပေမဲ့ အဲဒိလူဟာ ဘလော့အသိုင်းအ၀ိုင်းထဲကို ၀င်မလာတာတစ်ကြောင်း သူ့ဟာသူ အဲဒိ အသိုင်းအ၀ိုင်းလေးထဲမှာ နေပြီး ကျွန်မကို တိုက်ရိုက်လာမထိခိုက်သေးတာ တစ်ကြောင်းကြောင့် ဒီလိုပဲ နေနေခဲ့တာပါ...
ဒီတော့ အသိပေး ကြေငြာစရာရှိတာတွေ တစ်ပါတည်း ကြေငြာပါ့မယ်... facebook က search ကနေ English လို mabaydar လို့ ရိုက်လိုက်လို့ ထွက်လာတဲ့ result ၄ မျိုးရှိပါမယ်..."Ma BayDar" ဆိုတာ ကျွန်မပါ... ကျန်တာ ကျွန်မ မဟုတ်ပါဘူး...
ပိုမိုရှင်းသွားအောင် ကျွန်မသုံးဖူးသမျှ မှတ်မိသမျှ ကျွန်မရဲ့ Official account မှန်သမျှကို အောက်တွင်ဖော်ပြပါမည်...
My Official gmail : mabaydar@gmail.com
(My blog readers are welcomed to add. Pls sent mail to add me)
My Multiply: www.mabaydar.multiply.com
My Youtube channel : www.youtube.com/mabaydar
My facebook : http://www.facebook.com/mabaydar
My Twitter : http://twitter.com/mabaydar
My MBS profile: http://myanmarbloggersociety.ning.com/profile/mabaydar
My Photobucket profile : http://s307.photobucket.com/home/mabaydar
My dailymotion account: www.dailymotion.com/user/mabaydar
အခြားသော profile link ပြလို့ မရပင်မဲ့ အကောင့်ဖွင့်ထားတဲ့ ဖိုရမ်နဲ့ ၀က်ဆိုဒ်တစ်ချို့လဲ ရှိပါတယ်... မှတ်မိသလောက် ... TPmyanmar.org, www.yamc.info, www.padonma.com, flickr.com, www.soompi.com, www.crunchyroll.com, တွေမှာလဲ mabaydar နဲ့ register လုပ်ထားပါတယ်... ning ဆိုဒ်တွေမှာ ဆိုရင်တော့ MBS နဲ့ myanmarlensmen.ning ကိုပဲ အသုံးများပါတယ်... ကျန်တဲ့ ning တွေမှာလဲ မဗေဒါဆိုတာကို တွေ့ပါတယ်... အဲဒါ ဘယ်သူလဲ မသိပါ... ဥပမာ.. ချစ်သူ.ning တို့ဘာတို့ပါ...
ဒီလိုမျိုး ကိစ္စတွေအတွက် အစက ပိုစ့်တင်ပြီး မရေးချင်ခဲ့ပင်မဲ့ ကျွန်မအတွက် mabaydar မဗေဒါ ဆိုတာ အင်တာနက်ရဲ့ နေရာတိုင်းမှာ မရှိမဖြစ်အသုံးပြုနေရပါတယ်... ဒါတွေအားလုံးဟာ မဗေဒါအတွက်တော့ အင်တာနက် စသုံးခါစကတည်းက ယခုချိန်ထိ ကျွန်မရဲ့ သမိုင်းတွေပါပဲ...
*နောက်မှ ဖြည့်စွက်ချက်... ခု ဟိုအစ်မက www.mabaydar88.blogspot.com လို့ ပြောင်းလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက် ကွဲပြားသွားပြီလို့ မှတ်ယူမိပါတယ်... နောက်ဆို ဆီဗုံးတွေ ကွန်မန့်တွေမှာ မဗေဒါ ဆိုရင်တော့ ဒီက မဗေဒါပဲဖြစ်ပြီး မဗေဒါ၈၈ ဆိုရင်တော့ ဟိုအစ်မဖြစ်မယ်လို့ ကျွန်မဘက်က နားလည်မိပါတယ်...
စာကြွင်း။ ။ ကျွန်မက ဘလော့လိပ်စာပြောင်းခိုင်းခဲ့ခြင်းမဟုတ်သလို ဘလော့လိပ်စာက အစထဲက google function ကြောင့် ကွဲပြားခဲ့ပြီးသားပါ... ကလောင်အမည်နဲ့ တခြားဘလော့တွေ လျှောက်လည်ရင်သာ ကွဲပြားစေချင်ခဲ့တာပါ... မလိုအပ်ပဲ ဘလော့လိပ်စာတစ်ခုလုံးကြီး ပြောင်းပြလိုက်ရပြီး လိုရင်းကတော့ ဒီတိုင်းပဲရှိနေတဲ့အတွက် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိပါကြောင်း...*
Posted by mabaydar at 3:33 AM 51 comments :
တစ်ပတ်တစ်ခါ တင်မယ်ဆိုပြီး ပြောပြီးမှ မတင်နိုင်တဲ့အတွက် အလွန်တရာမှ ရှက်လဲရှက် အားလဲနာမိပါသည်... စောင့်ဖတ်နေသော သူများကို ကျေးဇူးလဲ အထူးတင်ရှိပါသည်... ပိုစ့်ပေါ်မှာ ကွန်မန့်သိပ်မတွေ့ရလို့ အားနည်းနေပင်မဲ့ ဂျီတော့နဲ့ တစ်မျိုး စကားလက်ဆင့်ကမ်း၍ တဖုံ ဆက်ရေးရန်တောင်းဆိုနေသူများအတွက် ဒီတစ်ခေါက် အပိုင်းကို ကြိုးစားပြီး တင်ဆက်လိုက်ပါတယ်... တကယ်တမ်းရေးမယ်ဆိုတော့မှ ဘာဆက်ရေးရမှန်းမသိဖြစ်မိတဲ့ အခါများသဖြင့် မရေးသေးပဲ စိတ်ထဲကျေနပ်လောက်မှ ရေးချင်သည့်စိတ်ကြောင့် မရေးဖြစ်ပဲ ဖြစ်နေရခြင်းဖြစ်ပါသည်... ဒါပေမဲ့ ခု ရေးလိုက်တာလဲ မိမိကိုယ်မိမိတော့ စိတ်ကျေနပ်ခြင်းမရှိသေးပါ... ကိုယ့်ကိုကိုယ် လိုသေးသည်ဟုသာ ခံစားနေရပါသည်... မဗေဒါ ၀တ္တုတွေဟာ တခြား စာရေးသူတွေလို တင်ဆက်ပုံခြင်း မတူပဲ ကွဲလွဲနေလျှင်လဲ ခွင့်လွှတ်နားလည်ပေးစေလိုပါသည်...
မဗေဒါက အမှန်တကယ် စာဖတ်ပျင်းသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး အရင်ကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း ၀တ္တုကို အစအဆုံး ဖတ်ဖူးတာ မနေ့တနေ့ကမှ တစ်အုပ်၂အုပ်မျှသာ ရှိသေးသည့်အတွက် တခြားစာရေးကောင်းသူများနှင့် မယှဉ်သာကောင်းရှိမည်... မဗေဒါရဲ့ ၀တ္တုအသွားအလာများနှင့် အခန်းဆက်များသည် ရုပ်ရှင်သဘောပိုဆောင်ကောင်း ဆောင်နေမည်ဟု ထင်မိသည်... ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရေးနေချိန်အတွင်း မဗေဒါရဲ့ စိတ်ကူးထဲ မျက်လုံးထဲတွင် တစ်ပါတည်း ရုပ်ရှင်ရိုက်နေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်... (ပြောရမည်ဆိုလျှင် တစ်ခါတစ်လေ ဇာတ်ဝင်တေးတောင်ပါသည်..).. အဲဒိ အတွက်ကြောင့် တင်ဆက်ပုံ အရေးအသားနှင့် သရုပ်ဖော်ပုံက ပရိတ်သတ်နှင့် ရင်းနှီးမှုမရှိဖြစ်နေလျှင် နားလည်သဘောပေါက်ပေးစေလိုပါသည်... ပိုမိုကောင်းမွန်သော အကြံဥာဏ်များရှိလျှင်လည်း ကွန်မန့်တွင် အကြံပေးသွားနိုင်ပါသည်... မဗေဒါ တတ်နိုင်သလောက် အကြံဥာဏ်များကို လက်ခံကြိုးစားသွားမည်ဖြစ်ပါသည်...
ရှေ့အပိုင်းများကို မဖတ်ရသေးသူများအတွက်... အပိုင်း(၁) နှင့် အပိုင်း (၂) ပေါ်သို့ ကလစ်နှိပ်၍ သွားရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်...
စာရေးကောင်းသော ပုဂ္ဂိုလ်များကို ရင်ထဲမှ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ လေးစားသလို... မဗေဒါရဲ့ စိတ်ကူးပေါက်ရာများကို စာသားများအဖြစ် ကစင့်ကလျား တင်ဆက်ထားသော်လည်း လာရောက်ဖတ်ရှုကြသော သူများအတွက်လဲ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲဝမ်းသာပြီး... ကွန်မန့်ပေး၍ဖြစ်စေ ဂျီတော့ကဖြစ်စေ မဗေဒါဆီပြန်ရောက်နိုင်သော သူ တဆင့်မှဖြစ်စေ အားပေးကြသော သူများကိုလဲ လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲ ကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်း...
Posted by mabaydar at 2:25 AM 8 comments :
Posted by mabaydar at 7:14 AM6comments :